Resin’ny mpampiaina radiôm-piarahamonina indizeny tany amin’ny Fitsarana inter-amerikana ny Fanjakana Goatemalteka · Global Voices teny Malagasy
Kihon-dalana ho an'ny radiôm-pokonolona ao Goatemalà ny didy nivoaka
Voadika ny 03 Janoary 2022 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Dansk, English, Español
Saripikan'ny toby fandefasam-peo Ixchel Estéreo, nahazoana alalana.
Ny lahatsoratra etoana dia navoakan'ny Prensa Comunitaria ary nasiana fanovana sy navoakan'ny Global Voices indray rehefa nahazoany alalana.
Nahita ny Fitsarana Inter-Amerikana Misahana ny Zon'Olombelona (IACHR) tamin'ny 17 desambra fa hitany ho tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny zo halalaka hiteny, hitovy eo anoloan'ny lalàna, ary ny fandraisana anjara eo amin'ny fiainana ara-kolontsain'ny vahoaka Mayana amin'ny tsy famelana azy ireny hampiasany ny toby fandefasam-peon'ny fiarahamonina ny Fanjakan'i Goatemalà.
Ny vondrona vazimba iharan'izany dia ny vahoaka Kaqchikel avy ao Sumpango, ny vahoaka Achí avy ao San Miguel Chicaj, ary ny vahoaka Mam avy ao Cajolá sy Todos Santos Cuchumatán. Nandidy ihany koa ny Fitsarana, izay andry ara-pitsarana mahaleotena ao amin'ny Fifandaminan'ny Fanjakana Amerikana [Organisation of American States (OAS)] ny hanomezana onitra ireo vondrom-piarahamonina niharan'izany toe-javatra izany.
Tao amin'ny didy navoakany, mifototra amin'ny raharaha nametrahan'ny fikambanana goatemalteka eny ifotony ary tohanan'ny Klinikam-bahoaka indizeny sy Zon'olombelona ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna ao amin'ny Oniversite Suffolk fitoriana voalohany tamin'ny taona 2012, hitan'ny Fitsarana fa tena manakana tanteraka tokoa ny zon'ny vahoaka indizeny hiteny malalaka, sady misoroka azy ireo tsy ho afa-mandray anjara amin'ny fiainana ara-kolontsaina ny fitsipiky ny fampielezam-peo ao amin'ny firenena.
Araka ny fanambaràna avy amin'ny fitsarana, farafahakeliny ny 43,6%-n'ny vahoakan’ i Goatemalà no vazimba (indizeny) ary manodidina ny 80%-n'ny vahoaka indizeny no miaina ao anaty tokonan'ny fahantrana.
Nanoratra tao amin'ny pejiny Facebook Ixchel Estéreo,iray amin'ireo toby fampielezam-peo nanao sonia fa “kihon-dalana ho an'ny toby fampielezam-peom-piarahamonina ao Goatemalà” ity didim-pitsarana ity.
Araka ny fanambaràn'ny fitsarana, “misy toby radio miisa 424 ao amin'ny firenena manely ao amin'ny onjam-peo FM ary miisa 90 ny toby manely feo ao amin'ny onjam-peo AM. Na izany aza, iray amin'ireo monja anefa no toby an'ny vondrom-piarahamonina indizeny. Ankoatra izany, maro ireo toby fampielezam-peon'ny fiarahamonina no velomin'ny vahoaka indizeny fa tsy mety mahazo lisansa avy amin'ny fanjakana. Iharan'ny antsojay manokana ny toby Ixchel ao Sumpango sy ny toby Voz del Pueblo ao San Miguel Chicaj, ary iharan'ny fanenjehana ara-pitsarana ny ro amin'ireo mirotsaka an-tsitrapo ao amin-dry zareo.”
Ao Amerika Latina, ny fampielezam-peom-piarahamonina dia toby radio tsy mikatsaka tombombarotra izay mikendry ny hampiroborobo ny fampandrosoana ny fokonolona ao an-toerana. Velomin'ny olona avy ao amin'ny fokonolona izy ireny ary ny ankamaroany dia hita any amin'ny faritra ambanivohitra. Ry zareo dia manolotra servisim-baovao (torohay), fanabeazana, fialamboly, ary ny fiarovana ny zon'ny fokonolona amin'izay mety ho fihoaram-pefy avy amin'ny Fanjakana.
Ao Goatemalà, tahaka ny any amin'ny faritra hafa ao Amerika Latina, efa nomelohin'ny mpiaro ny zon'olombelona ny fanenjehana ireo mpampiely [sary sy feo] an'ny fokonolona sy ny fanilikilihana azy ireo efa anaty tantara tsy ho ao anatin'ny fianakaviamben'ny radio.
Ny toby fampielezam-peo Ixchel sy Uqul Tinamit la Voz del Pueblo, avy ao an-tanànan'i Sumpango sy San Miguel Chicaj ao amin'ny departemantan'i Baja Verapaz ao Goatemalà, dia efa notafihan'ny manampahefana araka ny didim-pitsarana anaty ady heloka bevava notontosaina tamin'ny taona 2006 sy tamin'ny taona 2012, araka ny filaharany. Noraofina ny fitaovan-dry zareo ary nenjehina amin'ny heloka bevava ireo mpampiaina ny toby.
Hitan'ny Fitsarana fa ireny fanafihana sy fandraisana fitaovam-piasana avy amin'ny toby fampielezam-peo Ixchel sy Voz del Pueblo ireny dia tsy ara-dalàna ary manakana ny fahalalahan-dry zareo hiteny, izay mifanohitra amin'ny Dina Amerikana. Namehy ny Fitsarana, avy amin'izany toe-javatra izany, fa tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana izany zo izany i Goatemalà.
Nodidin'ny Fitsarana ny hametrahana fepetram-panonerana maro ho tambin'ireny fanitsakitsahana ireny. Tafiditra ao anatin'izany: fandraisana fepetra ilaina mba ahafahan'ireo vondrom-piarahamonina vazimba hita fa lasibatra mba ho afa-mampiaina ny radiom-pokonolona an-kalalahana; mandray fitsipika anatiny mankatoa ny toby fampielezam-peom-piarahamonina ho endrika fampitam-baovao hafa misarana; ary mampiditra ho ara-dalàna ny asan-dry zareo amin'ny fametrahana paika tsotra hahazoana lisansa.
Manampy izany, mametraka ny didy fa tokony hanokana ampahan'onjampeo ho an'ny toby radiom-piarahamonina indizeny ny Fanjakana, hifehy tena tsy handefa any amin'ny fitsarana ireo mpampiaina azy ireny, na hanafika ny toby fampielezam-peo, sy handraoka ny fitaovam-pampielezam-peo, sy hitondra fanamelohana ireo olona avy amin'ny fokonolona vazimba voampanga amin'ny fampiasana toby fampielezam-peo.
Ao amin'ny didy, manaiky ny mpitsara fa, ankoatra ny famelana ny fokonolona vazimba handray anjara feno amin'ny fiainam-bahoaka, dia ilaina ireny toby fampielezam-peo ireny hikojakojana, hampitana sy hanohizana ny fampivoarana ireny kolontsaina sy fiteny ireny.
“Fomba iray ny radiôm-piarahamonina ho an'ny vahoaka vazimba hampiharany ny zony hiteny ankahalalahana. Ilaina ny fahafahan-dry zareo mampiasa ny tobiny hampiroboroboany ny mari-panondroany, ny fiteniny, ny kolontsainy, ny fisoloan-tenany ary ny zo itambaramben'ny vahoaka vazimba,” hoy ny fivakin'ny fanambaràn'ny Fitsarana.
Noho izay antony izay, voatery ny firenena mikambana ao amin'ny OAS handray ny fepetra ilaina hamela ny fokonolona vazimba hiditra ao amin'ny tahalaben'ny radiôm-piarahamonina.